﻿पूर्वी नेपाल Archive - Purbeli.com
दिल्ली पब्लिक स्कुल, बिराटनगरले मोरङको बेलबारीसम्म स्कुल बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभिभावकहरुको चासो र माग बमोजिम स्कुलले यसै बर्षको सरस्वती पुजापछि बेलबारीसम्म स्कुल बस संचालन गर्न लागेको हो । बिहीबार बेलबारी स्थित ड्रिमल्याण्ड फन मा दिल्ली पब्लिक स्कुलले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम समेत गरेको छ । सोही अबसरमा दिल्ली... पुरा पढ्नुहोस
‍‍विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजले बिएस्सी नर्सिङ्ग चौथो बर्षमा सत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा अब्बल मानिदै आएको नोबेलले यस बर्ष बिएसी नर्सिङ्ग चौथो बर्षमा सत प्रतिशत नतिजा ल्याएको हो । नोबेलमा बिएस्सी नर्सिङ्ग चौथो बर्षमा २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । उनीहरु सबैजना उत्रीर्ण भएको नोबेल... पुरा पढ्नुहोस
उपचार खर्च अभावले थलिएकी बालिकाको डा. शर्माले गराइदिए अप्रेसन
नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर बसेकी एक बालिकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । डा.शर्माले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ कालिदहकी ७ बर्षीया रुस्मा बस्नेतको निधारमा पलाएको ट्यूमरको शल्यक्रियासहितको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराईदिएका हुन् । बिपन्न परिवारकी ती बालिकाको परिवारले खर्च जुटाउन नसक्दा उनको उपचार... पुरा पढ्नुहोस
विरामी पर्दा वा आपत विपत र जोखिमा परेको समयमा सहयोग गर्न पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने उदेश्यले धनकुटाको पत्रकारहरुले एक रुपैयांँदेखि दश लाख अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष राजेश्वर वहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतमा सम्पन्न भएको बैठकले धनकुटाका पत्रकारहरुलाई विरामी पर्दा वा आपत विपत र जोखिमा परेको... पुरा पढ्नुहोस
मतदाता नामावली प्रकाशन तथा अद्यावाधिक गराउँदै धनकुटा नगरपालिका
धनकुटा नगरपालिकाले माघ १५ देखि फाल्गुण २ गतेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन, दावी विरोध, नाम तथा ठेगाना सच्याउने वा अद्यावाधिक गर्ने भएको छ । निर्वाचनका लागि मतदाता अद्यावाधिक गर्ने वारे बुधबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ्गको अध्यक्षतामा भएको मतदाता अद्यावाधिक विषयक सर्वपक्षिय अन्तरकृया... पुरा पढ्नुहोस
लामो समयदेखि विवादमा परेको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक निर्माणले गति लिने भएको छ । सुनसरीको दुहबीदेखि तरहरासम्मको सडक मापदण्डमा पर्ने घरहरूको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधान भएसँगै ६ लेन उक्त सडक निर्माण अघि बढ्ने भएको हो । आउँदो माघ महीनाभित्र सकिने गरी सडक क्षेत्रभित्र पर्ने करीब ६०० भौतिक संरचना हटाउने तयारी भइरहेको आयोजना... पुरा पढ्नुहोस